चितामा राखेकाे कोरोना स‌क्रमितकाे शवमा रगत देखिएपछि… – Rapti Khabar
2021, June 18, Friday
चितामा राखेकाे कोरोना स‌क्रमितकाे शवमा रगत देखिएपछि…
१८ कात्तिक, विराटनगर । विराटनगरमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शवलाई चितामा राखेर जलाउन खोज्ने क्रममा रगत देखिएपछि मृतकका आफन्तले तीन घण्टासम्म शव जलाएनन् ।
विराटनगर महानगरपालिका–११ का ४९ वर्षीय कपडा व्यापारीको मंगलबार बिहान न्यूरो अस्पताल विराटनगरको कोभिड १९ अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
मृत्युपछि नेपाली सेनाको शव व्यवस्थापन टोलीले मंगलबार दिउँसो करिब १२ बजे विराटनगर हाटखोलामा रहेको परमबिश्रान्ती घाटमा बनाइएको चितामा शव राखिदिएको थियो । तर शव हेर्दा अनुहारमा रगत देखिएपछि आफन्तले शवबाट मानव अंग निकालेको आशंकामा चितामा आगो लगाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
छोरा महावीर रौनियारका अनुसार बुबाको शव दिउँसो १२ बजे नेपाली सेनाको टोलीले घाटमा लगिदिएको थियो । ‘मृत्यु हुँदाको समयमा बुबाको शरीरमा रगत थिएन,’ मृतकका छोरा महाबीरले भने, ‘तर चितामा अन्तिम पटक बुबाको मुख हेर्दा रगत देखिएपछि आशंका लागेर दागबत्ती नदिएका हौं ।’
अस्पतालको चिकित्सकको टोलीले मुखबाट रगत आएको र रगत आउने कारण बताएपछि आफन्तले तीन घण्टापछि मात्रै शव जलाएका थिए ।
न्यूरो अस्पतालका डाक्टर अनिल मेहताका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरुको नाक र मुखबाट रगत आउन सक्छ । फोक्सोमा समस्या हुँदा रगत जमेर निस्कन सक्ने उनले बताए । रगत आउन सक्ने कारण बताएपछि आफन्तले अन्तिम संस्कार गरेको उनले बताए ।
१४ कात्तिकमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका पुरुषको मंगलबार बिहान ३ः५० मा न्यूरो अस्पतालको कोभिड १९ अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
कोरोना संक्रमितको शव उत्खनन गरेर अत्येष्टि
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका अर्घाखाँचीका एक व्यक्तिको साढे चार महिनापछि शव उत्खनन् गरी अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
मालारानी गाउँपालिका–४ का ३० वर्षीय बाबुराम खनालले आफ्ना ५८ वर्षीय बुबा यमलाल खनालको शव उत्खनन् गरी अन्त्येष्टि गरेका हुन् । बाबुरामका बुबा यमलालको २८ जेठमा मृत्यु भएको थियो ।
मृत्युपछि गरिएको कोरोना परीक्षणको नतिजा जेठ ३० गते आउँदा यमलालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । क्वारेन्टिमै बस्दा पनि कोरोना परीक्षणका लागि बुबाको स्वाब लिने काम भएपनि स्वाब हराएको बाबुरामले बताए ।
कोरोना संक्रमण फैलने डरले शव व्यवस्थापनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि रातुकास्थित खुल्ला चौरमा बुबाको शव कुरेर तीन दिनसम्म बस्न बाध्य भएको बाबुरामले गुनासो गरे । ‘हिन्दु परम्परा अनुसार बुबाको अन्त्येष्टि गर्नका लागि धेरै अनुरोध गर्‍यौं, तर मिल्दैन भन्नुभयो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सेनाले रातुका क्षेत्रको वनमा लगेर शव व्यवस्थापन गर्न खोज्दा अवरोध भयो । त्यसपछि जेठ ३१ गते घर नजिकै रहेको वन क्षेत्रको ठूलढुँगामा लगेर शव गाड्ने काम भयो ।’
भारतको मुम्बईबाट जेठको दोस्रो सातामा घर फर्किएका यमलाल बाडाचौरस्थित एक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेका थिए ।
क्वारेन्टिमा बसेकै समयमा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि जेठ २७ गते उनलाई उपचारका लागि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पताल ल्याइएको थियो । बाबुरामले भने, ‘पाँच वर्षअघि बुबाको घाँटीको अपरेसन भएको थियो । उहाँ दमको रोगी पनि हुनुहुन्थ्यो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई अर्घाखाँची जिल्ला अस्पताल लग्यौँ । तर अस्पतालले बुटवल रेफर गरिदियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार पश्चात घर लैजाने क्रममा जेठ २८ गते उहाँको बाटोमै मृत्यु हुन पुग्यो ।’
त्यतिबेला आफ्नो धार्मिक परम्पराअनुसार परिवारले चाहेको स्थानमा बुबाको अन्त्येष्टि गर्न नपाएको भन्दै उनले बुबाको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर अहिले आएर हिन्दु परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरेको बताए ।
उनले अघि थपे, ‘सपनामा बुबा भौँतारिँदै हिँड्नु भएको मात्रै देखिरहने थालेँ । हिन्दु परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि नगरेकै कारण सपनामा यस्तो देख्नु परेको होला भन्ने मनमा लागिरह्यो । भदौमै शव उत्खनन् गरे अन्त्येष्टि गर्ने सोच बनाएको थिएँ । तर शव गाडेको स्थलमा बाढी र पहिरोका कारण त्ये सम्भव हुन सकेन । त्यसैले कात्तिक १५ गते गुल्मीको रिडीस्थित रुरु क्षेत्रमा लगेर अन्त्येष्टि गरेका हौं ।’
अन्त्येष्टिपछि प्रशासनको चासो
बुबाको शव उत्खनन् गरी अन्त्येष्टि गरिएको बारे स्थानीय प्रशासनले फोनमार्फत चासो राखेको बाबुरामले बताए । बाबुरामले भने, ‘स्थानीय प्रशासनबाट फोन आएको थियो । शव उत्खनन् गरी अन्त्येष्टि गर्दा वडासँग समन्वय भयो कि भएन भनेर मात्रै सोध्नु भएको थियो । अरु केही सोध्नु भएन ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यका अनुसार शव उत्खनन् गरी अन्त्येष्टि गर्ने काम भएको जानकारी आफूले पाएको बताए । आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शव उत्खनन् गरी अन्त्येष्टि गर्ने बारेमा हामीसँग समन्वय भएको छैन । तर पनि हामीले त्यतिबेला नै शव उत्खनन् गरेर धार्मिक परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गर्न सक्नु हुन्छ भनेका थियौं । तर उहाँहरुले अहिले आएर अन्त्येष्टि गर्नु भएको रहेछ ।’ -अनलाइनखबरबाट
असोज १० देखि १६ गतेसम्म तपाईको साप्ताहिक भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुस
Posted on September 26, 2020 September 26, 2020 Author Rapti Khabar
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) यो साता हराएको आत्मविश्वास जाग्नेछ । नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । प्राविधिक कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य सहजै अघि बढ्नेछ । व्यापार तथा सेयर कारोबारमा रुचि बढ्नेछ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामापनि मनलाग्नेछ । यो साताका […]
आज २०७७ भदौ २७ गते शनिबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुस
Posted on September 12, 2020 Author Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ २७ गते शनिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष कुनै पनि व्यावसायिक काममा व्यस्त रहनुहोस्, महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्दा फलदायी हुनेछ । अभिभावकको […]
निर्मला आ’त्मह’त्याबारे यस्तो छ प्रह’रीको प्रार’म्भिक अनु’सन्धान
Posted on September 18, 2020 Author Rapti Khabar
काठमाडौं, असोज २ कैलालीकी पत्रकार निर्मला पहराईले आफ्ना प्रेमिको अर्कै प्रेमिका रहेको थाहा पाएपछि आ’त्मह’त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। कैलाली प्रहरीले सँगै काम गर्ने कैलाली एफएमकै पत्रकार २४ वर्षीय ललित जाग्रीलाई सोहि विषयमा अनुसन्धानका लागि प’क्राउ गरेको छ। निर्मला घरबाट ललितकोमा जान्छु भनेर हिडेको पाइएपछि ललितलाई प्रहरीले थप अनु’सन्धा’नका लागि प’क्राउ गरेको […]
आज २०७७ कात्तिक १८ गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
लुम्बिनी प्रदेशमा श’व गाडेको पाँच महिनापछि निकालेर दागबत्ती दिएपछि…